Architecture - Dhizaini magazini
Kuvandudzwa Kwemadhorobha Tahrir Square ndiye musana wenhoroondo yezvematongerwo enyika yeEgypt uye nekudaro kumutsiridza magadzirirwo ayo emadhorobha ndeyematongerwo enyika, zvakatipoteredza nemagariro. Urongwa hwehumhizha hunosanganisira kuvhara mimwe migwagwa nekuzvisanganisa munzvimbo iripo pasina kuvhiringidza kuyerera kwemotokari. Matatu emapurojekiti akagadzirwa kuitira kuti iratidze nzvimbo dzekuvaraidza uye dzekutengesa pamwe nechirangaridzo kuratidza nhoroondo yemazuva ano yezvematongerwo enyika. Urongwa hwakatora nzvimbo yakaringana yekufamba-famba uye yekugara nzvimbo uye yakakura nzvimbo yakasvibira nzvimbo kuendesa ruvara kuguta.
Nzvimbo Yeruzhinji Iko kukurudzira kuseri kwechimiro ichi rudo rwekureruka uye nzwisiso yeMondlo yekudhonzwa uye chiratidzo neinobata hunhu uye huchokwadi hunoratidzwa munhoroondo yeCikilic Kufic calligraphy. Iyi dhizaini inoratidzira yekudyidzana kwakabatana pakati pezvitaera zvinosimudzira meseji kuti pane mukana wekuisanganisa zvakasiyana unoita kunge unopokana nezvekuonekwa kweziso rakashama uku uchicheka zvakadzika mukati mehungwaru hweshure kwavo kunogona kunge kwakafanana kunozoguma nehunyanzvi hwekudyidzana inokwezva kupfuura kunzwisisika kuri pachena.
Real Estate Agency Isu tinogadzira zvivakwa, zvemukati uye zvemukati mune chirongwa ichi. Mhosva iyi ndeye "Realestate Agency", zita rearistate iri [Sky villa], saka tora pfungwa neakadai zita sezita rekutanga. Uye chirongwa ichi chiri muXiamen dhorobha, mamiriro akapoterera pachigadziko haana kunaka, kune dzimba dzekare uye nzvimbo yekuvaka, yakatarisana nechikoro, hapana nzvimbo yakatenderedza. Mukupedzisira, nepfungwa ye [Float], dhonza nzvimbo yekutengesa kusvika pakukwirira kwe2F, uye gadzira yako pachayo nzvimbo, danho-danho dziva, saka nzvimbo yekutengesa inofarira kuyangarara mumvura, uye vashanyi vanoyambuka yakakura acreage padziva, uye nepasi pevhu repasi pehofisi yekutengesa, famba kuenda kune masitepisi ekuseri uye unokwira kuimba yekutengesa. Iyo yekuvaka iri simbi simbi, dhizaini yekugadzira uye yemukati dhizaini inotsvaga iyo yekubatanidza uye kubatana muhunyanzvi.
Imba This pro is villa villa inowanikwa [SAC Beigan Hill International Arts Center] muShanghai masango, kune nzvimbo yemitambo munharaunda, ichipa zvakawanda zvetsika tsika, villa inogona kuva hofisi kana studio kana imba, nharaunda scape Center ine yakakura dziva , iyi modhi iri zvakananga parutivi rwegungwa. Izvo zvivakwa zvakapatsanurwa maficha ndiyo yemukati nzvimbo isina kana makoramu, ayo anopa hukuru hukuru uye kugona mukugadzira mukugadzirwa kune mukati meimba nzvimbo, asi zvakare nekuda kwerusununguko uye kusiyanisa kwenzvimbo, chimiro chemukati, nzira yekugadzira inowedzera kutenderera, iyo geometry inokwanisika. inogadzira nzvimbo yemukati, zvakare inoenderana nemazano ekugadzira anoteverwa ne [Art Center]. Inopatsanurwa-chikamu mhando kwechimiro uye makuru masitepisi ari pakati pekudyara nzvimbo, nepo kuruboshwe nekurudyi makamuri akapatsanuka-nhanho nhanho, saka huwandu hwese hwashanu hwakasiyana hwamukati hwedanho nzvimbo inobatanidza nzvimbo.
Real Estate Agency Senge "Dance of the Ribbon", ine yakavhurika nzvimbo spatial, yakazara nzvimbo chena, shandisa pfungwa ye kutumira fenicha, gadzira hukama hunobatana nenzvimbo, chakanyanya kukosha hukama huri pakati pemadziro nekabati, batanidza tafura ine denga uye pasi, paradza chikamu neisina kujairika geometry nemaune, kwete chete kuvhara wakawandisa hurema hwechirema danda asi zvakare ratidza chechimanje chaiyo pfungwa, kuratidza curve-dhizaini hunhu hunhu hwembabvu kuburikidza kuratidzwa kwechiedza.
Real Estate Yekutengesa Nzvimbo
Real Estate Yekutengesa Nzvimbo t's real estate yekutengesa nzvimbo. Iyo yepakutanga yekugadzira fomu ndeyegirazi yemabhokisi. Maumbirwo emukati mese anogona kuoneka kubva kunze kwechivakwa uye dhizaini yemukati inonyatsoratidzwa nekusimudzwa kwechivako. Kune nzvimbo ina dzebasa, nzvimbo yemagetsi inoratidzira, nzvimbo yekuratidzira yemhando, kutaurirana sofa uye nzvimbo yekuratidzira yezvinhu. Nzvimbo ina dzebasa dzinotaridzika dzakapararira uye dzakapararira. Saka takaisa ribhoni kubatanidza nzvimbo yese kuti isvike mbiri dhizaini: 1. kubatanidza nzvimbo dzebasa 2. Kugadzira kukwirira kwekuvaka.
Kuvandudzwa Kwemadhorobha Nzvimbo Yeruzhinji Real Estate Agency Imba Real Estate Agency Real Estate Yekutengesa Nzvimbo